WARBIXIN: BLAISE MATUIDI oo u soo duulay England si uu wada xaajood ula galo mid ka mida kooxaha ka dhisan Manchester…Waa tee? – Gool FM
WARBIXIN: BLAISE MATUIDI oo u soo duulay England si uu wada xaajood ula galo mid ka mida kooxaha ka dhisan Manchester…Waa tee?
Kaafi July 4, 2016
(Manchester) 04 Luulyo 2016. BLAISE MATUIDI waxa uu si lama filaan ah ugu biiri karaa Mancehster Unired kaddib markii ay warar sheegaya in uu wadahadalo ugu soo dhoofay UK ay soo bexeen.
Xiddiga Paris Saint-Germain waxa uu fure u noqday France isaga oo ka saacadisay in ay soo garaan afar dhamaadka Euro 2016.
Laaiin sida laga soo xiganayo Goal.com qeybtiisa qorta luuqada French-ga, 29 jirka waxaa fasax loo siiyey in uu ka tago xaraunta tababarka si uu wada xaajood ugu duulo UK.
Walow aysan magacaabin kooxda ay tahay, Sunsport waxa ay fahansan tahay in United tahay Naadiga isku dayaya saxiixiisa.
Matuidi waxaa uga dhiman qandaraaska uu kula jiro PSG laba sano, laakiin tababare Unai Emery waxa uu ka baaraan dagayaa in uu is badal baaxad leh ku sameyo safkiisa.
Haatan waxa ay u muuqataa in Matuidi ka mid yahay kuwa daaqada ka baxaya, halka United loola xiriirinayo in ay £20million heshiis dhan ku qaadato.
Laakiin Mourinho waxa uu mashquul ku yahay gacan ku dhigida bartilmaameedyo tiro leh si uu horumar ugu sameyo safkiisa Old Trafford.
Eric Bailly ayaa ahaa saxiixiisii kowaad oo uu £30million uga soo iibsaday Villlarreal, waxaa sidoo kale xigay Zlatan Ibrahimovic oo toddobaadkii tagay si bilaash ah uga yimi PSG.
Waxaa la filayaa in ay sidoo kale ku dhawaaqaan Henrikh Mkhitaryan imaanshihiisa kaas oo ay £26.3million ugala wareegeen Borussia Dortmund.
Ibrahimovic iyo Mkhitaryan waxaa u dilaala Mino Raiola waana isla ninka wakiilka u ah Matuidi.
Matuidi waxaa la filayaa in uu ku laabto kaabka tababarka xulka France eek u yaal Clairefontaine habeenka isniinta (Caawa) iyaga oo u diyaar garoobaya kulanka afar dhamaadka ay Germany uga hor imanayaan.
WARBIXIN: Maxaa ka jira in Lionel Messi uu ka laabanayo go’aankii uu uga fariistay ciyaaraha Caalamiga ah?... (Madaxweynaha Argentina iyo Maradona oo ka qayb galay Mudaaharaad lagu dalbanayo in Messi ku soo laabto xulka) + Sawirro
Henrikh Mkhitaryan oo soo gaaray Manchester si uu tijaabada caafimaad ugu maro United